မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက် သုံးသူတွေအတွက် Wifi ဖွင့်ပြီး ကွန်ပျုတာသို့ ခွဲချိတ်နည်း
ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက် သုံးသူတွေအတွက် Wifi ဖွင့်ပြီး ကွန်ပျုတာသို့ ခွဲချိတ်နည်း
ဒီနည်းကတော့ ဖုန်းက အင်တာနက်လိုင်းကို ကွန်ပျုတာမှာ ချိတ်ပီးသုံးမယ့်စနစ်ပါ
ဖုန်းမှာ ၀ိုင်ဖိုင်စနစ်ပါရမှာ ဖြစ်သလို ကွန်ပျုတာကလည်း ၀ိုင်ဖိုင်စနစ်ပါမှရပါတယ်
အဲ့လိုဆိုရင် စချိတ်လို့ ဖို့ အတွက် ဖုန်းမှာ အင်တာနက်လိုင်း ဖွင့်ထားရပါမယ်
ဖုန်းမှာ ချက်တင်လုပ်ရင်း ကွန်ပျုတာကိုလည်း ခွဲသုံးတဲ့သဘောတရား တစ်ခုပါပဲ။
အောက်က နည်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ ....။
၁ - Seting ==>Wireless and networks ကိုဝင်ပါ
၂ - Tethering and porable hospot ကိုဆက်ပြီးဝင်ပါ
၃ - Portable Wi-Fi hospot ကို အမှန်ချစ်လိုက်ရင် ရပါပီ
ဒါဆိုရင် ဖုန်းက ၀ိုင်ဖိုင်စပြီးလွှင့်နေပါပြီ ။ ကွန်ပျုတာမှာပေါ်နေပါလိမ့်မယ် ။ ဒီလိုဆို
ချိတ်လို့ ရပါပြီ ။ ဖုန်းမှာလည်း ချက်တင်လုပ်နေလို့ ရပါတယ် ။ကွန်ပျုတာမှာလည်း
သုံးလို့ ရပါပြီ ဒီနည်းက Galaxy ဖုန်းတွေမှာ ချိတ်နည်းအတူတူပါပဲ ။ဆင်မပြေပါက
မေးပို့ ပီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ကွန်ပျုတာက လိုင်းကို ပြန်ခွဲနည်း လာမည် ကြာမည်
မြန်မာပြည်က ဖုန်းနဲ့ သုံးသူများ လက်တော့နဲ့ ချိတ်ကြည့်ပါ အဆင်ပြေပါ၏.......။
Author Anonymous at 11:44:00 PM
Labels: Networking ဆိုင်ရာစာအုပ်, Phone နဲ့ သက်ဆိုင်သော, ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျုတာ Wifi ချိတ်နည်း
Kay Thari Khin said...
koko gyi said...
ကျွန်တော်ဖုန်းက huawei ဖုန်ပါ လက်တော့က acer အစကချိပ် ရတယ် အခုမရလို့ပါ ဘာဖြစ်လဲ ကူညီပါ
ကျနော့်ဖုန်းက Samsung Galaxy Ace GT-S5830 ပါ . အရင်ကတော့ ကွန်ပျူတာကနေ wifi လွှင့်ထားရင် ဖုန်းနဲ့ဖမ်းသုံးလို့ရပါတယ် . နောက်ပိုင်း ဖုန်းနဲ့ ဖမ်းသုံးလို့မရတော့တာ ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတာ ပြောပြကူညီပေးပါဦးခင်ဗျား. ကျနော့်ဆိုင်ကနေ အခမဲ့လွှင့်ပေးထားတာပါ . အခြားဖုန်းတွေအားလုံးရပြီး ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့မှမရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ .
Din Aung said...
​ကျေးဇူးပါ အဆင်​​ပြေ တယ်​ ဗျာ
- Tethering and porable hospot ကို အမှန်ခြစ်လိုက်တော့ဖုန်းက wifi လွှင့်ပေးပါတယ် .. လပ်တော့မှာလည်း အဲဒီလိုင်းက လာပေါ်တယ် ဒါပေမယ့် ချိတ်ကြည့်တော့ internet security key တောင်းပါတယ် ဘာကိုဖြည့်ပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကို ကျေးဇူးပြုကာ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်.. အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်.. အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ နည်းပညာတွေကို မျှဝေနိုင်ပါစေ
Htut Zaw said...
ကျွန်တော့ ကွန်ပျူတာ window တင်ပြီးကာစက သုံးရပြီး ၂ ပတ်ခန့်ကြာတော့ အင်တာနတ် သုံးမရဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့် မရတာ ၊ဘာလို့ မရဘူးဆိုတာလေး ကိုသိချင်ပါတယ်။ ကူညီပေးပါ ခင် ဗျာ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ei Nan said...
ဖုန်းနဲ့သုံးရင် လိုင်းတတ်တယ် ကွန်ပျုတာနဲ့ဆိုရင် လိုင်း
မတတ်တော့ဘူး နက်ဝက်နဲ့ ဆိုင်လားမသိဘူး ကူညီပေးပါဦး